MMSPE. Ngwá ọrụ nyocha ọhụụ maka ụmụaka - Ọzụzụ Ọzụzụ
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » MMSPE. Ngwá ọrụ nyocha ọhụụ maka ụmụaka
Onye ọ bụla na - eme nchọpụta na neuropsychology okenye maara Nnyocha Ọnọdụ Mental State (MMSE) ma eleghi anya, n'enye aha ya, otutu ndi okacha-eme ihe gbasara ihe gbasara akuko ga na eme ya.
O nwere ike bụrụ nyocha kachasị nyocha nke ọgụgụ isi n'oge okenye na ọkachasị na okenye.
N'agbanyeghị na-enwere ọtụtụ adịghị ike, ule a dị ngwa, na-adị mfe nchịkwa ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya. Ya mere, oke mgbasa ya na ọkwa mba ụwa na ngalaba geri abụghị ihe ijuanya.
Nyere ndi ahu akuko edeputara, Scarpa na ndi otu ibe Ekpebiela imepụta mmegharị maka afọ na-eto eto, nke a ga-eji na ụmụaka dị n'agbata afọ 6 na 14. Ọ bụ ya Ule nyocha nke Obere-Mental State (MMSPE).
Ntughari a bu ihe ndi choronghazi na mbara oge na oge (ya na data gbasaraonwe), comprensione e emeputa onu, usọ ihe atụ, ọgụgụ, ide e ngụkọta oge, ebe nchekwa okwu, ebe nchekwa, usoro ezi uche dị na ya, nkà nka, mmara nke ụdị na agba, mara usoro anụ ahụ e ndi isi oru.
A choro nchoputa di oke n’onodi mmekorita, nlebara anya na iru oru ndi ozo.
The mmapụta (5th percentile) nke uru, n’ikpeazụ, na-agbanwe na ndabere nke agụmakwụkwọ nke ndị nne na nna.
Ndị ode akwụkwọ kwenyere na nnwale a nwere ike ịba uru na ọnọdụ ụlọ ọrụ, ọ kachasị na ọnọdụ uche na ọnọdụ akwara na-eduga na mmekorita na-ezighi ezi na enweghị nlebara anya zuru ezu iji kwado nyocha nke ukwuu.
Peviani na ndi ozo sochiri ha hazigharịrị ule a mgbe ọ dị obere, na-eme ka o jiri ụmụaka mee ihe site na 36 ruo 72 ọnwa.
N'ime nyocha ọzọ, Kenelli na ndị ọrụ mmekọrịta ha nwalere ike nke MMSPE iji chọpụta etu o siri nwee ike mata ụmụaka na ụmụaka nọ n'ụzọ ziri ezi.
Otu ìgwè mmadụ sitere na ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke ala n'okpuru ọchịchị ka e doro anya na MMSPE, wee jiri data tụnyere ndị si na batrị nke nyocha akwara ozi karie ọtụtụ, mejupụtara Matrices Raven agba, ihe akaebe nke ekpemekpe e ọmụmụ asụsụ, oge digits duzie ma laa azu, Nlere anya e aru oru.
Ndị ọrụ nyocha ahụ kọwara dị ka "ndị nwere ụkọ akwara ozi" ndị niile nwetara akara abụọ ma ọ bụ karịa (arụmọrụ dị n'okpuru pasent 5) wee jiri nsonaazụ nke batara na-enyocha pụta dị ka ụkpụrụ gold.
Gịnị ka ha hụrụ?
N'iji batrị neuropsychological ndị a kpọtụrụ aha dị ka ntụnyere, MMSPE gosipụtara nchọpụta ziri ezi nke 83%, ọ bụghị nke ezigbo, yana ezigbo njiri mara (91%) ma e jiri ya tụnyere obere nghọta (74%). Ọdịmma dị mma na uru amụma adịghị mma ma 87% na 81%, otu (maka nkọwa ngwa ngwa nke ihe echiche, na specificityọ bara uru amụma amụma na na-ezighi ezi amụma amụma, gbaa ajụjụ anyị okwunkowa).
N’aka ozo, MMSPE jisiri ike gbochie 91% nke mmadu n’enweghi mmezu nke amamịghe mana achoputara nkọ di ka “gbasiri ike” 26% nke ndị mmadụ maara ihe n’ezie.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Nyocha nke dyslexia: nnwale ahụ
Na nchịkọta, nnwale a pụtara ihe bara uru, n'ihi njikwa ngwa ngwa ya, ebe ọ na-enweghị ike ịme nyocha zuru oke. Dịka ọmụmaatụ, ndị dere tụgharịrị ojiji nke ndị ọrịa ụmụaka dị ka nyocha iji ghọta ma ọ bụrụ na achọrọ ọmụmụ ga - esochi neuropsychological. Agbanyeghị, ịdị ala dị ala na-ebelata oke arụmọrụ ha nke ọma kọwapụta ụmụaka nwere nsogbu ịma aka (ka eme nyocha ha) kemgbe, dabere na data nke nyocha zoro aka., ihe dịka otu onye n'ime ụmụaka anọ nwere mmejọ adịghị ike ga-amata site na MMSPE.
Ogologo batri ule na obere akara (na ndi mmadu)
Nyocha nke dyslexia: nnwale ahụ
Nnyocha nyocha nke dyslexia? (akụkụ 1)
Nnyocha nyocha nke dyslexia? (akụkụ 2)
Site na nyocha rue PDP: ụzọ abụọ enwere ike
Nchoputa nke dyscalculia: ntule ntule na ule (Nkebi nke mbu: akara nke mbu na nke ozo
Nchoputa nke dyscalculia: ntule ntule na ule (Part II: ulo akwukwo di elu na onye okenye + enwetara dyscalculia)
DSA ọ bụla dị iche. Ọrịa nwekwara ike ịdị
Ọsọ ọgụgụ n’uche n’uche: etu esi tụọ ya na ihe kpatara ọ ga - agbanwe ụzọ anyị si enyocha ndị ntorobịa na ndị okenye
Cainelli, E., Di Giacomo, DL, Mantegazza, G., Vedovelli, L., Favaro, J., & Boniver, C. (2020). Ọrụ prognostic nke nyocha Nnyocha Ọrịa Mini-Mental State (MMSPE) na arụ ọrụ neuropsychological. Sayensị akwara ozi, 41(3), 619-623.
Folstein, MF, Folstein, SE, & McHugh, PR (1975). "Obere ọnọdụ uche": usoro dị mma maka grading ọnọdụ ọgụgụ nke ndị ọrịa maka onye na-ahụ maka ụlọ ọgwụ. Nyocha nke psychiatric nnyocha, 12(3), 189-198.
Mitchell, AJ (2013). Nyocha nke Obere-Mental State MMSE (MMSE): mmelite na nchoputa ya bu maka nsogbu ọgụgụ isi. na Ngwa nyocha nyocha(p. 15-46). Springer, London.
Peviani, V., Scarpa, P., Vedovelli, S., & Bottini, G. (2020). Obere nyocha nke nwatakiri-State nke Mental State Pediatric Exam (MMSPE) na data gbasara ụmụaka agedtali dị afọ iri atọ na isii na iri asaa na abụọ. Ntinye Neuropsychology: Nwa, 9(1), 92-96.
Scarpa, P., Toraldo, A., Peviani, V., & Bottini, G. (2017). Ka anyị belata ya: nhazi ọkwa nke Italian nke MMSPE (Mini-Mental State Pediatric Examination), ihe nyocha ederede dị mkpirikpi ụmụaka na-aga ụlọ akwụkwọ. Sayensị akwara ozi, 38(1), 157-162.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ọrịa Alzheimer na nkà ịkwọ ụgbọala
Ule nyocha nke Obere-Mental State, MMSE, Nnyocha MMSPEm Mini-Mental State, Inyocha ọgụgụ isi, afọ nyocha, nyocha ihu ụmụaka
MMSPE. Ngwá ọrụ nyocha ọhụụ maka ụmụaka2020-04-222020-04-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/04/mmspe.jpg200px200px
Ogologo batri ule na obere akara (na ndi mmadu)Edemede, Ntụle
Iji satnav ọ na-emebi ikike ọgụgụ isi anyị?Edemede, Ebe nchekwa